डेंगु लाग्न नदिन यस्तो सल्लाह दिन्छन् डा. कल्याण, लागि हाल्यो भने के गर्ने त ?
अहिले देशभरीका झण्डै ४८ जिल्लामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । जसमा ३ हजार ५८० जना भन्दा बढीलाई डेंगु लागेको, ४ जनाले ज्यान गुमाएको र देशभरी झण्डै ७० हजार सर्वसाधारण डेंगुबाट प्रभावित बनेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
डेंगुको रोकथाम नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि यो विषयले जर्वजस्त प्रवेश पाइरहेको छ । डेंगु नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि आइपरेको छ ।
डेंगु भएको लामखुट्टले हाम्रो शरीरमा भाइरस सारेको केही दिनमा ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने, मांशपेशी र जोर्नी दुख्ने, निकै थकित बनाउने, टाउँको दुख्ने, आँखाको गेडी दुखेको महसुस हुने र निकै कमलाई गम्भीर अवस्थामा नाक र मुखबाट रगत आउने, दिशामा रगत देखिने, शरिरका मसिना रक्तनली leak भएर रगतमा हुने तरल पदार्थ बाहिर निस्कनाले ब्लडप्रेशरको कमी हुने, शरिरका अन्य अंगमा असर हुने, होस गुमाउने लगायतका समस्या समेत सुरु हुन्छ ।
प्राय राम्रो Diet र Rest विरामीले पाएमा यो आफै सन्चो हुन्छ । कुनै औषधि खानु नपर्ने पनि डाक्टर कल्याण्ड बताउँछन् ।
डाक्टर कल्याण्डका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका, बालबालिका, बुढापाका, सुत्केरी र दिर्घरोगीहरु जस्तै सुगर, हाइ ब्लडप्रेशर, मिर्गौला रोगी, मुटु आदिका समस्या भएर लामो समयदेखि औषधि खाइरहेकाले भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ विचार नपुर्याउदा ज्यान जान पनि सक्छ ।
डेंगु प्राय आफै सन्चो हुने रोग भएको र डेंगुको भाइरस मार्ने कुनै औषधि उपचार नभएको बताउँछन् डा. कल्याण । साथै यो आफै सन्चो नभएर रोग फैलिदै गयो भने रोगले शरीमार पुर्याउने असरमात्र समाधान गर्न सकिन्छ ।
उपचारका लागि अस्पताल गएपछि त्यहाँ डेंगु छ छैन भनेर अनुमान गर्ने NSI Antigen CBC liver Enzyme तुरुन्त गरिन्छ ।
यसबाहेक अन्य रगत टेस्ट र Scan पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी डेंगु भएको निकै समय र अशक्त भएर अस्पताल गएको अवस्थामा ।
रगतमा प्लेटलेसको Platelets को मात्रा झर्दै जान सक्छ । ५० हजार वा यो भन्दा अझै तल झरेर फेरि केही दिनमा आफैं संख्या बढ्छ । Platelets को संख्या घट्दै जाँदा शरीरको भित्री अंग र बाहिर समेत t Bleeding हुन सक्छ । त्यसैले अलि बढी सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै liver Enzymes हरु पनि बढ्छन् । ब्क्त् AST (SGOT), ALT (SGPT) पनि बढ्छन । पछि गएर विस्तारै नर्मल लेभलमा पुग्छन् ।
डेंगु लागेपछि कुनैपनि शारिरीक कामकार्य गर्नुहुँदैन । घर वरपर हल्का हिड्ने बाहेक अन्य कुरा गर्नु हुँदैन । मानसिक stress पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । आफ्नो नियमित जागिर पनि रोक्नुपर्छ । शरीरलाई दबाब पर्नेगरी बाहिरी कुराहरु कुनै पनि थप्नु हुँदैन ।
स्वस्थ्य खानेकुरा टाइम मिलाएर दिनको ५–६ पटक खानुहोस् । प्रसस्त फलफूलको रस र पानी पिउनुहोस् । माछा मासु खान रोक्नु पर्दैन । तर Dite Balance गरेर Moderate मात्रामा खानुपर्छ । सकेसम्म Bake, Grilled वा Boil गरेको खानुपर्छ । शरीरलाई पचाउन सजिलो हुने तरिकाले खानुपर्छ ।
ज्वरो आएको कारण खाना नरुचेको भए सिटामोल खाएर ज्वरो घटाएर खानाखानु पर्छ । खाना नखाने वा खाना कम गर्ने गर्नु हुँदैन ।
वाक्वाक्ती लागेर खाना खान नसक्ने भए वाकवाक्ती नलाग्ने औषधि खाएर केही समयपछि खाना खानुपर्छ ।
डेंगु फैलनेAedes लामखुट्टेले उज्यालो हुँदा मात्र टोक्ने हुँदा बाहिर बस्दा वा हिड्दा पातलो र लामो लामबाउले कपडा लगाउने । मिल्छ भने लामखुट्टे धपाउने वा लामखुट्टे नजिक आउन नदिने स्प्रे वा लोसन लगाउनुपर्छ ।
डेंगुरोग आफै सन्चो हुने र यसको उपचार घरमै गर्न मिल्ने भएपनि एक एकपटक अस्प्ताल गएर घर आएपछि पूरा आराम र डाइट लिने गर्दा पनि बान्तामा वा दिसा रगत देखियो, पेट अति दुख्न थाल्यो, शरीर निकै गल्यो र सिकिस्त भयो, बर्बराउने र बेहोस् हुने भयो, सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर चिसो हुँदै गयो भने विरामीलाई फेरि तुरुन्तै अस्पताल दौडाइहाल्नुपर्छ ।
समयमा रोग पत्ता लगाएर उपयुक्र्त उपचार गरेको खण्डमा डेंगुका कारण ज्यान जाँदैन ।